Etazonia dia manadihady ny fanodikodinam-bola amin'ny Bitcoin | Vaovao momba ny gadget
Etazonia dia manadihady ny fanodikodinam-bola mety hitranga amin'ny Bitcoin
Eder Esteban | | Cryptocurrencies, About us
Ny tsenan'ny cryptocurrency, miaraka amin'i Bitcoin no mitarika, dia tsy manana taona tsara indrindra. Nidina be ny sandany nanomboka ny volana janoary. Amin'ny ampahany betsaka noho ny fitsipika sy fandrarana maro tonga. Zavatra iray izay nisy fiantraikany tamin'ny tsena tamin'ny fomba miavaka. Nefa toa mbola tsy vita ny olana. Hatramin'ny nanombohan'ny departemantan'ny Fitsarana Etazonia fanadihadiana.
Natao io fikarohana io asehoy fa ny vidin'ny Bitcoin sy ny crypto hafa, toy ny Ethereum, dia namboarina, avy amin'ny vondrona sasany. Ka mitady hampiseho izy ireo raha nisy fomba fanao tsy ara-dalàna natao tamin'ireny tranga ireny.
Loharanom-baovao maro no efa nilaza tamin'ny haino aman-jery sasany fa fantatr'izy ireo ny fiandohan'ity fanadihadiana ity tany Etazonia. Izy io dia mitady hahafantatra raha ny vidin'ny Bitcoin dia nisy fitaomana na nanandrana hitaomana. Anisan'ireo teknika nampiasainay ny fahitantsika azy, izay mitady hameno ny tsena amin'ny baiko diso ka mieritreritra ny mpampiasa vola hafa fa tokony hividy na hivarotra.
Na dia tsy izy irery aza, satria nahitana antso an-tariby fanasan-damba hafa koa. Ao anatin'izany dia miasa miaraka aminy ny mivadika, miaraka amin'ny tanjona hanomezana fiheverana fa misy ny fangatahana eo amin'ny tsena. Noho izany, ny mpampiasa vola hafa dia manapa-kevitra ny hiasa ihany koa, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny Bitcoin.
Any Etazonia izy ireo dia miahiahy ho an'ny fisolokiana mety hitranga miaraka amin'ny Bitcoin sy ny sisa amin'ny crypto. Na dia tsy vaovao aza ny ahiahy fa namboamboarina ny tsena, satria efa nanomboka ny taona lasa ny fanamarihana. Toa nisy fahamarinana kely tao amin'izy ireo.
Mety ity fanadihadiana ity alaivo an-tsaina hoe ny fanentanana farany amin'ny fampidirana fitsipika iray ny tsenan'ny cryptocurrency. Zavatra izay toa efa misy vondrona sasany te-hanao, miaraka amin'i Gemini avy amin'ny kambana Twinklevoss eo an-tampon-tànana. Ny loza mety hitranga amin'ny Bitcoin dia noresahina tany Eropa tato ho ato, na dia mbola tsy misy lalàna mifehy an'io aza. Hiova tsy ho ela ve ny raharaha?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Etazonia dia manadihady ny fanodikodinam-bola mety hitranga amin'ny Bitcoin
Inona ny GDPR ary inona no fiantraikany amintsika mpanjifa?
Spotify dia handoa 112 tapitrisa dolara hampiasa mozika tsy misy fahazoan-dàlana